INONA NO MPANARA-MASO NY MIFIDY NY LALAO: TOROHEVITRA MAHASOA SY NY FAMERENANA NY TSARA INDRINDRA - FIKAROHANA VY - 2019
Tena Fikarohana vy
Mifidy monitor ho an'ny gaming: ambony ny tsara indrindra amin'ny endri-javatra
Ho an'ny fahafinaretana fara-tampony amin'ny lalan'ny lalao ordinatera dia tsy ampy ny mividy fitaovam-pitaovam-baolina sy fitaovam-pitaovana. Ny tsipiriany manan-danja indrindra dia ny monitor. Ny modely lalao dia samy hafa amin'ny birao sy ny habeny ary ny kalitaon'ny sary.
Latabatra: Fomba fakantsary iombonana
Kilasin'ny safidy hifidy ny lalao - top 10 tsara indrindra
Sarany ambany vidiny
Sarin'ny vidin'ny vidiny
Sarany avo lenta
Latabatra: fampitahàna mpitsidika avy amin'ny lisitra
Rehefa misafidy mpitsangantsangana amin'ny lalao ianao, dia mila manaraka ny fepetra toy ny diagonal, expansion, tweets, matrix, ary fifandraisana ianao.
Ny 2018 sy 21, 24, 27 ary 32 inch diagonals dia heverina ho manan-danja. Ny fitiliana madinika dia manana tombony kokoa noho ny hafa. Ny santimetatra vaovao dia mahatonga ny karatra videôa handefa vaovao misimisy kokoa, izay manafaingana ny asan'ny vy.
Ny mpanaraka ny 24 ka hatramin'ny 27 "no safidy tsara indrindra ho an'ny ordinatera gaming. Mijery tsara izy ireo ary mamela anao hijery ireo tsipiriany rehetra amin'ireo olona tianao indrindra.
Ny fitaovana misy diapona mihoatra ny 30 santimetatra dia tsy mety ho an'ny rehetra. Tena lehibe ireo mpitsidika ireo ka tsy manam-potoana hisainana ny zava-drehetra eo aminy ny mason'olombelona.
Rehefa misafidy monitor iray misy diagonaly maherin'ny 30 ", tandremo ireo modely voalefona: mora kokoa amin'ny fahitana sary lehibe sy azo ampiharina amin'ny fametrahana eo amin'ny birao kely
Ny fepetra faharoa amin'ny fisafidianana ny monitor dia ny famaha sy ny format. Maro ireo mpilalao matihanina no mino fa ny 16: 9 sy 16:10 no tena zava-dehibe. Ny fitiliana toy izany dia mibaribary ary mitovy amin'ny endriky ny lakozia mahazatra.
Ny hany malaza amin'izao fotoana izao dia ny famahana ny 1366 x 768 piksela, na HD, na dia taona vitsy lasa aza dia samy hafa tanteraka ny zava-drehetra. Lasa haingana ny teknôlôjia: ny format manan-danja ho an'ny mpitsidika dia izao HD Full (1920 x 1080). Ampahafantariny tsara ny endriky ny sary rehetra.
Ny mpankafy ny fanehoana mazava kokoa dia ho tadiavina Ultra HD sy 4K. Ny sary 2560 x 1440 sy 3840 x 2160 dia mametraka ilay sary mazava sy manan-karena amin'ny antsipiriany manintona ny singa kely indrindra.
Ny avo kokoa ny famahana ny fanaraha-maso, ny loharanom-pahefan'ny solosaina manokana dia mandany ny sarimihetsika ny rafitra.
Pixel resolution Famoronana anarana Aspect Ratio
Ny taham-pamokarana dia manondro ny habetsaky ny tarehimarika maromaro hita isan-tsegondra. 60 FPS amin'ny 60 Hz dia singa tsara tarehy sy tsara tarehy ho an'ny lalao mora.
Ny avo kokoa ny tahan'ny famelombelon'io sary io, ny miboridana sy ny mendri-kaja kokoa ny sary eo amin'ny efijery
Na izany aza, ny mpilalao sarimihetsika malaza indrindra dia 120-144 Hz. Raha mieritreritra ny hividy fitaovana misy haavo mahazatra ianao, dia makà antoka fa ny sarimihetsika video dia afaka mametraka ny tahan'ny sary.
Ao amin'ny tsena amin'izao fotoana izao, afaka mahita mpijery misy karazany telo ianao:
Ny ankabeazan'ny tetibola TN. Ny monitera amin'ny fitaovana toy izany dia tsy lafo ary natao ho an'ny fampiasana birao. Ny fotoana fametrahana sary, ny fijerena ny tara-pahazavana, ny fahatsaran'ny loko ary ny tsy fitoviana dia tsy mamela ireo fitaovana ireo hanomezan'ny mpampiasa fahafinaretana be indrindra avy amin'ny lalao.
IPS sy VA - matrix amin'ny ambaratonga samihafa. Ny fanaraha-maso amin'ny singa efa napetraka dia lafo kokoa, saingy manana fijery malalaka izay tsy manova ny sary, ny fananganana loko voajanahary ary ny fifanoherana avo lenta.
Matrix type TN IPS MVA / PVA
Vidiny, miala. avy amin'ny 3 000 manomboka amin'ny 5 000 hatramin'ny 10 000
Ny valin'ny fotoana, ms 6-8 4-5 2-3
Jereo ny angona tery malalaka malalaka
Loko fanovozam-bolana ambany lava eo ho eo
mifanohitra ambany antonony lava
Ny karazana fifandraisana mety indrindra ho an'ny solosaina gaming dia DVI na HDMI. Ny voalohany dia heverina ho vitsy dia vitsy, nefa manohana ny resolution Dual Link hatramin'ny 2560 x 1600.
HDMI dia fari-pahaizana maoderina kokoa ho an'ny fifandraisana eo amin'ny monitor sy ny karatra video. Fizarana 3 nozaraina - 1.4, 2.0 ary 2.1. Ity farany dia manana bandwidth lehibe.
HDMI, karazana fifandraisana maoderina kokoa, manohana ny fanapahan-kevitra hatramin'ny 10K sy ny hafanana 120 Hz
Raha jerena amin'ireo fepetra voatanisa ireo dia azo atao ny mamantatra ireo mpilalao tsara indrindra amin'ny sokajy faha-10 amin'ny sokajy telo.
Mpilalao sarimihetsika tsara dia ao anatin'ny segondra ara-bola.
Ny modely VS278Q dia iray amin'ireo mpitsabo tsara indrindra amin'ny banky amin'ny Asus. Manohana ny fifandraisana VGA sy HDMI izy io, ary ny famirapiratana ambony sy ny haavon'ny valim-bavaka dia manome sary manjavozavo sy avo lenta tsara.
Ny fitaovana dia nomena ny "hertzka" tena tsara, izay hampiseho sary miisa 144 isan-tsegondra miaraka amin'ny fahombiazana amin'ny vy.
Ny vahaolana ASUS VS278Q dia marika ho an'ny vidin'ny vidiny - 1920 x 1080 piksela, izay mifanaraka amin'ny lafiny iray amin'ny 16: 9
Ny tombotsoa azo dia fantatra:
avo lenta ambony;
300 cd / m mamirapiratra
ny ilàna ny hanatsarana ny sary;
ny sisin'ny tranga sy ny efijery;
raha toa ka latsaka ny masoandro.
Ny Monitor LG 22MP58VQ dia mamokatra sary mazava sy mazava ao amin'ny Full HD ary kely ny haben'ny - 21.5 inch fotsiny. Ny tombontsoa lehibe amin'ny fahita-monitor - tranobe azo antoka, izay ahafahana miorina tsara eo amin'ny biraony ary manitsy ny toerana misy ny efijery.
Tsy misy fitarainana mikasika ny famolavolana loko sy ny halalin'ny sary - manana safidy tsara indrindra amin'ny volanao ianao. Omeo fitaovana mihoatra ny 7000 roubles ilay fitaovana.
LG 22MP58VQ - safidy tsara an-teti-bola ho an'ireo izay tsy miandrandra ny fampisehoana FPS amin'ny fampisehoana maoderina
sary tsara kalitao;
Zava-doza roa ihany no misy:
Feno faribolana manodidina ny fampiratiana.
Te-hamarana ny fampisehoana ny segondra amin'ny tetibola aho amin'ny fanaraha-maso tsara iray hafa avy amin'ny orinasa AOC. Ny fitaovana dia manana TN-matrix tsara, izay mampiseho sary mamirapiratra sy maranitra. Tokony hanasongadina ihany koa ny fanasongadinana ny Flicker-Free, izay mamaha ny olan'ny tsy fahampian-tsakafo.
Ny monitor dia mifandray amin'ny reny amin'ny VGA, ary amin'ny karatra video amin'ny HDMI. Fotoana kely ho an'ny valin'ny 1 ms dia fanampiana lehibe ho an'ny fitaovana tsy misy vidiny sy avo lenta toy izany.
Ny sarany ambany amin'ny maso AOC G2260VWQ6 - 9 000 roubles
Ireto misy tombontsoa:
ny jiro mirehitra tsy maotina.
Amin'ny tsy fahampian-tsakafo, afaka misafidy solosaina tsara tarehy fotsiny ianao, raha tsy hoe ny rafitra dia tsy hanome anao karatra feno.
Ny mpitsabo avy amin'ny tapany afovoany dia hifanaraka amin'ireo mpilalao haingam-pandeha izay mitady asa tsara ho an'ny vidiny mora.
Modely VG248QE - mpanara-maso hafa avy amin'ny orinasa ASUS, izay heverina ho tena tsara amin'ny vidin'ny vidiny sy ny kalitaony. Ny fitaovana dia manana diagonal ny 24 santimetatra ary ny HD tanteraka.
Ny mpanara-maso toy izany dia nomena ny "hertzka" ambony, ka nahatratra ny mari-pana amin'ny 144 Hz. Mampifandray amin'ny ordinatera amin'ny HDMI 1.4, Dual-link DVI-D sy interfaces DisplayPort.
Ireo mpandrafitra dia nanome ny VG248QE monitor miaraka amin'ny fanohanana 3D, izay afaka mankafy amin'ny solomaso manokana
velaran-drakitra avo velively;
Ny TN-matrix ho an'ny fanaraha-maso ny segondra vidin'ny vidiny dia tsy ny famantarana tsara indrindra. Izany dia azo ampifandraisina amin'ny votoatin'ny modely.
Samsung U28E590D dia iray amin'ireo mpanara-maso 28-inch, izay azo vidiana ho 15 arivo roapolo. Ity fitaovana ity dia manavaka ny diagonal midadasika, fa koa amin'ny alalan'ny fanapaha-kevitra mitombo kokoa, izay hahatonga azy io kokoa kokoa noho ny fiavian'ny modely mitovy.
Amin'ny 60 hz ny mari-pamantarana dia manana alim-pandanjana 3840 x 2160. Miaraka amin'ny famirapiratana avo lenta sy ny mifanohitra amin'izany dia mamokatra sary tsara tarehy ilay fitaovana.
Ny teknolojia FreeSync dia mahatonga ny sary eo amin'ny mpanera ho bebe kokoa sy mahafinaritra kokoa.
Ny tombony dia:
resolution dia 3840 x 2160;
hatraiza hatraiza sy mifanohitra;
Hahazo tombontsoa ny vidin'ny vidiny;
FreeSync teknôlôjia ho an'ny fandosehana mando.
ambany hertzka ho an'ny mpanara-maso lehibe toy izany;
ireo fepetra ilaina amin'ny Hardware ho an'ny hazakazaka lalao amin'ny Ultra HD.
Ny maso avy ao Acer dia manintona ny maso avy hatrany amin'ny fomba marevaka sy marevaka azy: ny fitaovana dia tsy manana lafiny and ambony. Ny tontonana ambany dia ahitana ny bokotra navigation sy ny logo logo malaza.
Ny Monitors dia afaka mirehareha kokoa ny fahombiazany sy ny hatsaran'izy ireo ary ny fanampiana tsy ampoizina. Voalohany, mendrika ny hanasongadinana ny fotoana ambany ny valiny - 1 ms fotsiny.
Faharoa, misy ny famirapiratana ambony sy ny hafanana amin'ny hafanana 144 Hz.
Fahatelo, ny mpanara-maso dia manana fitaovana avo lenta 4-watt, izay, mazava ho azy, dia tsy hanolo ny olona feno, fa ho fanampiny fanampiny ho an'ny fivorian'ny lalao miditra an-dakilasy.
Ny vola midadasika eo amin'ny mpanara-maso ny Acer KG271Cbmidpx dia manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 19 000 roubles
avo hertzovka ao amin'ny 144 Hz;
fivoriana avo lenta.
Ny solonanarana dia manana safidy amin'ny Full HD. Ho an'ny lalao maoderina maro dia tsy misy dikany intsony. Saingy amin'ny toetra sarobidy sy sarobidy hafa ihany, dia sarotra ny mampiavaka ny fanapahan-kevitra toy izany amin'ny votoatin'ny modely.
Farany, ny mpizahatany segondra avo lenta dia safidy mpilalao matihanina izay tsy vitan'ny fampisehoana avo lenta fa tsy ilaina.
ASUS ROG Strix XG27VQ - LCD monitor tsara tarehy amin'ny vatany. Maty avo lenta sy mamiratra VA miaraka amin'ny hafatr'i Resolution 144 Hz ary Full HD dia tsy hamela ny mpankafy gaming.
Ny vola miditra amin'ny vola ASUS ROG Strix XG27VQ - 30 000 roubles
Tahan'ny fanamafisana avo lenta;
elegant body curved;
Hahazo tombony amin'ny vidiny.
Ny fanaraha-maso dia manana fahasamihafana mazava - fa tsy ny tahan'ny fandraisana avo indrindra, izay 4 ms fotsiny.
Ny mpanara-maso avy ao LG dia manana endri-javatra tsy fahita hafahafa sy ny famolavolana tsy mazava. Aspect ratio 21: 9 mahatonga ny sarimihetsika kokoa ny sarimihetsika. Ny habetsaky 2560 x 1080 piksela dia hanome ny traikefa an-tariby vaovao ary hanome fahafahana anao hahita zavatra bebe kokoa noho ny amin'ny mpitsidika mahazatra.
Ny birao LG 34UC79G dia mila birao lehibe noho ny halavany: tsy ho mora ny hametraka modely toy izany eo amin'ny fanaka ny habeny mahazatra
IPS-matrix avo lenta;
ny fahafahana mampifandray ny monitor amin'ny USB 3.0.
Heverina ho maimaim-poana sy tsy fahita firy ny vahaolana tsy natao ho an'ny tombontsoa rehetra. Eto, araho amin'ny fanirianao sy ny safidinao manokana.
32 santimetatra, sary miafina, loko marevaka, fandrefesana fandrefesana hafanana amin'ny 144 Hz, fahagagana mahagaga sy ny fametrahana sary - izany rehetra izany dia mikasika ny Acer XZ321QUbmijpphzx. Ny vidin'ny fitaovana dia 40 000 roubles.
Ny mpanara-maso ny Acer XZ321QUbmijpphzx dia manana fitaovana avo lenta izay afaka manolo tanteraka ny mpandahateny
tsara tarehy sary tsara;
famolavolana avo sy hafanam-po;
tady fohy mba hampifandraisana amin'ny PC;
fisehoan-javatra mitohy isan-taona.
Ny mpanara-maso sarotra indrindra amin'ity lisitra ity, ny Alienware AW3418DW, dia tsy hita amin'ny fitaovana ankapobeny omena. Ity dia modely manokana izay mety, indrindra aloha ho an'ireo izay te hanana jiro ambony kalitao 4K. Ny tena matanjaka IPS-matrix sy ny fifandanjana mifanohitra amin'ny 1000: 1 dia hamorona sary mamirapiratra sy mamy indrindra.
Ny monitore dia manana 34.1 santimetatra, fa ny vatana sy ny bikabikan'ny bakteria dia tsy mahatonga azy ho lehibe, izay ahafahanao mahita ny tsipiriany rehetra. Ny setroka manomboka amin'ny 120 Hz dia manomboka ny lalao amin'ny toerana ambony indrindra.
Ataovy azo antoka fa mifanaraka amin'ny fahaiza-manaon'ny Alienware AW3418DW ny ordinateranao, ny vidin'ny vola amin'izany dia 80,000 roubles.
Amin'ireo tombony voamarikao:
kisary tsara tarehy;
IPS-matrix avoiding quality.
Ny minus manan-danja amin'ny modely dia ny fihenan'ny herinaratra.
modely diagonal fahazoan-dalana teraka hatetika vidiny
LG 34UC79G 34 2560h1080 IPS 144 Hz 35.000 rubles
Alienware AW3418DW 34 3440×1440 IPS 120 Hz 80,000 roubles
Rehefa misafidy monitor ianao dia eritrereto ny tanjon'ny fividianana sy ny toetoetry ny ordinatera. Tsy misy dikany ny mividy lafo lafo, raha malemy ny fitaovana na tsy mazoto miasa amin'ny gaming ary tsy afaka mankasitraka tanteraka ny tombontsoa azo avy amin'ny fitaovana vaovao.
https://termotools.com mg.termotools.com © Fikarohana vy 2019